NGOMEYI 20-22, 2011 iingcali ezaziwayo ezivela kumazwe angaphezu kwama-40 zahlanganisa eMoscow kwiNkongolo Yeminyaka Engama-60 Yezizwe Ngezizwe yoMbutho waseYurophu Wotyando Lwentliziyo. Intatheli kamabonwakude eRashiya yathi: “Koogqirha, le nkongolo ibaluleke njengemidlalo yeeOlimpiki kwiimbaleki.”
Into eyatsal’ umdla wabaninzi zontathu ezo ntsuku yaba liqonga ekwakufumaneka kulo inkcazelo ngeendlela zonyango ezingatofeli igazi. Kweli qonga kwakukho amalungu eSebe Lenkcazelo Yezibhedlele lamaNgqina kaYehova (HIS). Apho oogqirha babevuyiswa kukufumana amakhulu eencwadi, iiDVD namanqaku anenkcazelo yezonyango ngalo mbandela ubalulekileyo. Eyona nto babeyifuna ngamandla yividiyo ethi, Transfusion-Alternative Strategies—Simple, Safe, Effective. *
ISebe Lenkcazelo Yezibhedlele lamaNgqina kaYehova (HIS) kwindawo yomboniso. Apho oogqirha bavuyiswa kukufumana amakhulu eencwadi, iiDVD namanqaku anenkcazelo yezonyango
Oogqirha abaninzi ababeze kwelo qonga bavuma ngamxhelo-mnye ukuba igazi limele lilondolozwe xa kusenziwa utyando. Omnye ugqirha wentliziyo waseItali owayethetha kuloo nkongolo wathi uwazi kakuhle amaNgqina kaYehova yaye uye watyanda ngempumelelo iintliziyo zamaNgqina amalunga nama-70 ngaphandle kokutofela igazi. Wakhankanya nento yokuba ukungatofeli igazi sele kulisiko kwikliniki yakhe. Unjingalwazi weDeutsches Herzzentrum eBerlin (German Heart Institute Berlin) wathabatha iiDVD ezimbini eyakhe neyomnye ugqirha asebenza naye. Waxelela abantu ababelapho ukuba wayesandul’ ukwenza utyando olungatofel’ igazi kumntwana onobunzima obuziikhilogram ezi-2, 5; yaye ikliniki yakhe yenze olo tyando nakubantwana abanobunzima obungaphantsi kobo.
Impumelelo kutyando olungatofeli igazi ifunyanwa ngokusetyenziswa kakuhle konyango, ubugcisa, izixhobo, namayeza afanelekileyo
Kwisithuba senyanga emva kwalo nkongolo yaseMoscow, oogqirha abavela kumazwe ahlukeneyo baya kwinkomfa yeSine yaseBelomorsk Yongcelele Zokuthomalalisa Iintlungu Nonyango Olungxamisekileyo kwiNgingqi yoMntla-ntshona weRashiya, kwisixeko saseArkhangel’sk. ISebe Lenkcazelo Yezibhedlele (HIS) laphinda lamisa iqonga apho laza laphumelela gqitha nakwesi isihlandlo. Esakubona inkcazelo eyayilapho, omnye ugqirha waseSt. Petersburg wathi, “Yile nto kanye siyifunayo!” Wathi ibuhlungu gqitha into yokuba oogxa bakhe besatofela igazi kwizigulana ezitshileyo kuba nje isiqhelo sisoyisa ingqondo. Wongeza wathi: “Inkcazelo yenu iza kuba luncedo kwinkomfa ecetywayo eSt. Petersburg kwindlela yokunyanga abatshileyo.”
Ehlabathini jikelele, bayanda oogqirha abazibonayo iingenelo zonyango notyando olungatofeli igazi. Kusafuneka silinde ukuze sibone enoba le nkqubo ayinakumiselwa njengeyona ndlela yokunyanga ehlabathini jikelele kusini na ngenye imini.
^ isiqe. 3 Iveliswe ngamaNgqina kaYehova.